Semalt: Sei & Sei Kuchengetedza Senyu Yako Kubva kuMarware
Waiziva here kuti chirevo chekutanga chinonzi malware (sezvinonzi malware) chinoreva chakaipa mumitauro yese yechiLatini kusanganisira Spanish? Izvozvo zvinokuudza zvakawanda. Sangano reMalware kana rakashata rinoshandiswa nevapanduki ve-cyber kukanganisa kukanganisa kune vashandisi vasingashandisi makombiyuta. Iwe unogona kufunga nezvemwarereve seprogram ye intrusive inoshandiswa kupisa manzwiro evanhu - zvinyorwa zvekuregeresa + mapepa, mapepa ekwereti, chikwereti chebhengi, nhamba yezvokuchengetedzwa kwevanhu - iyo inoshandiswa kubira chizivi (kubata uzivi), mari uye nezvimwe zvinhu zvinotyisa - pakettiauton renkaat virostat. Dambudziko reMarware rinogona kuva chero ripi zvaro. Inogona kuva Trojan horse, virus, ransomware, worm kana spyware.
Tevera mazano ari pamusoro apa anotsanangurwa naArtem Abgarian, Mutungamiri Mukuru weVatengi Vokubudirira Semalt , uye ruzivo rwako rwega ega rucharamba rwakachengeteka.
Nyoreveti inoshandiswa sei pamusoro pako?
Kune nzira dzakawanda dzinoshandiswa nehucker kana cyber criminal dzinogona kusunungura malware. Nzira inonyanyozivikanwa ndeyokutumira email ye-phishing. Iyi imeyiri inogona kutarisa kusina maturo, asi inowanzo ine chibatanidza kana kuti iyo inoshandiswa faira iyo kana inenge yakasungirwa inoisa malware mukati mekombiyuta yako.
Kana iyi kadhijeyiti inowanikwa muPC yako, inoongorora deta yako yekudzivirira uye kuchengetedza hurongwa hwekushaya simba. Kana pane zvikwereti pane imwe nzvimbo muhurongwa, ipapo iyo malware inoshandisa kusanganisa mazano ekutsvaga kuparadza kushanda pavanenge vachibira data yega. Somuenzaniso, browser yako inogona kuzarura mabhii akawanda kunze kwako iwe uchida kuita saizvozvo. Pane dzimwe nguva, unonzwa ghost audio (inzwi rwiyo rwenheyo runotamba pamabha iwe usina kukwanisa kuzarura). Ko iyo malware inoziva sei password yako? Zvakanaka, vanoshandisa nzira yekuunganidza data inonzi keylogging..Iyi nzira inotevera zvese zvaunoshandisa paunenge uchipinda mune imwe nhoroondo. Ndizvo zvinyorwa zvisingabatsiri zvinoratidza hutano hwehuwandu hwevanhu, pini, nemapepwords.
Kutyisidzira kwemareji ndeyechokwadi. Zvechokwadi, software iri kuoma zvakaoma kuona kuti zvinorevei kuti maitiro ekuzivikanwa kwekuzivikanwa uye mamwe mhaka dzepabonde angawedzera. Usatya kana zvakadaro. Pane nzira dzakawanda dzaungashandisa kuzvidzivirira kubva panjodzi iyi.
Nzira yekudzivirira sei malware intrusion
Inofanirwa kutamba yakachengeteka uye uchenjere. Uine izvi mupfungwa, mazano anotevera anofanira kukuchengetedza kure nezvinokuvadza:
Usanamatira pazvibatanidza kana kuzarura zvinyorwa zvitsvene kana mafaira anogadziriswa kubva kumamayero ayo asingatombozivi kana kutaurirana navo nguva dzose.
Tora, shandisa uye uvandudze shanduro yemazuva antivirus software, anti spyware uye wobva waisa firewall. Usashandise zvakashata zvehutachiona hwemapurisa.
Rega kushandisa motokari kuchengetedza shanduko. Kana iwe unokurudzirwa nechokutsvaga kuti uyeuke pasi password shandisa 'kamwe'. Sivha PC yako apo iwe usingashandisi.
Iva nechokwadi chokuti unoshandisa shanduro yezvino purogiramu paPC yako, laptop kana tablet. Sezvakangoita, vashandi vanobatanidza matsva matsva ekuchengetedza kuti varambe vachiita zvakaipa.
Usazvibvumira kuti uve mumwe munhu anorwara ne-malware. Dzimwe nguva untivirus yako inogona kuvhara firiji nemashoko 'kutyisidzira kunoonekwa'. Kana izvozvo zvichiitika ipapo usasvinudze hutano hwakatumirwa kune email yako kana mavara. Iregere. Iwe uchava wakachengeteka.